Dongguan Enuo sokubumbela Co., Ltd.kuyinto subsidiary of Hong Kong BHD Group, uyilo sokubumbela zeplastiki kunye nokuvelisa ishishini labo engundoqo. Ngaphaya koko, iinxalenye zesinyithi zomatshini we-CNC, iimveliso zohlobo lwe-R & D, uvavanyo lwe-R / D, iimveliso zeplastikhi, ukutshiza kunye nendibano nayo.
Ingcamango ethile yobomi besikhunta seplastiki
Ubomi besikhunta seplastikhi bubhekisa kukuqina komngundo onokuthi uvelise iimveliso ezifanelekileyo. Ngokubanzi sibhekisa kwinani lomjikelo womsebenzi ogqityiweyo kukungunda okanye inani lezinto ezivelisiweyo. Ngexesha lokusetyenziswa kwesiqhelo sokubumba, iinxalenye zayo ziya kusilela ngenxa yokunxiba okanye ukonakala ...
kushishino ukungunda ngqo lizwe lam ikamva eliqaqambileyo, kwaye igcina isantya kunye kwimarike yamazwe ngamazwe
Ngokukhula koqoqosho, ishishini lokungunda liya lisanda, kwaye iimfuno zokubumba kumashishini amaninzi ziqala ukutshintsha. Ithemba lokungunda ngokuchanekileyo libanzi, kwaye imfuno yokubumba ngokuchanekileyo inqabile. Nangona kunjalo, inani eliphezulu, ...
Kutheni le nto imveliso ebunjiweyo yenaliti ine-engile yoyilo? Ngaba ubukhulu bayo buxhomekeke phi?
1. Kutheni iimveliso zenaliti ebunjiweyo zine-engile yedrafti? Ngokubanzi, iimveliso zenaliti ebunjiweyo kufuneka zilungiswe ngokusebenzisa ukungunda okungqinelanayo. Emva kokuba imveliso yenaliti ebunjiweyo ibunjiwe kwaye inyange, ithathwa ngaphandle kwesikhunta okanye isiseko, esaziwa njengekudiliza. Ngenxa yokubumba ukuncipha kunye ...
Iingxaki Ngokudibana Kulungiswa Iqhubekekiswa ngumngundo zeplastiki
Plastic ngumngundo zisetyenziselwa ukuvelisa iibhetshi ezinkulu iinaliti ngenaliti oluxonxiweyo, nto leyo eye iingenelo ukusebenza eliphezulu, umgangatho elungileyo, ukusika ngaphantsi, okonga umbane kunye nezinto ekrwada, kunye neendleko eziphantsi. Nangona kunjalo, ngenxa processing ezintsonkothileyo ngumngundo zeplastiki, iingxaki ezininzi ziya kuba en ...
Indlela yokwenza uphuculo lomngundo weplastikhi
Icandelo lokulungisa umngundo likhule ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo kwaye liye laya lisomelela ngakumbi. Ukongeza ekwaziseni izixhobo eziphambili kunye netekhnoloji, ulwenziwo lokungunda lukwenzile iqela le-R & D kunye neenkampani zoyilo ukuqhubeka nokuphucula amandla ophando kunye nophuhliso ...
Yintoni ekufuneka uyiqwalasele kulungiso lweplastikhi
Phakathi kweenkqubo ezahlukeneyo zokubumba zomngundo weplastiki, inaliti yokubumba yeyona isetyenziswa ngokuqhelekileyo. Ithiyori ibonisa ukuba ziphene yokubumba ine iingenelo izinto enamandla ukusetyenziswa, ukukwazi ukubumba iimveliso kunye nezakhiwo ezintsonkothileyo ngexesha elinye, iimeko inkqubo oqolileyo, phezulu ...
Uphando malunga nophuhliso mkhuba
Ngophuhliso oluqhubekayo loqoqosho lwelizwe lam kunye netekhnoloji, imakethi yelizwe lam isiseko sokubumbela besisebenza kakhulu kule minyaka idlulileyo. Xa kuthelekiswa neemveliso zangaphandle, ukubumba kwelizwe lam kunenzuzo yexabiso eliphantsi lokuvelisa, elinganeli ukwenza imveliso yasekhaya ...
Zithini iimfuno ezisisiseko zoyilo lweplastikhi kunye nokwenza izinto
Ukuveliswa kweemveliso zorhwebo akunakwahlulwa kukungunda. Ke ngoko, ukuze sikwazi ukwenza iimveliso zeplastikhi ezilungileyo, kufuneka kuqala sibe nomngundo ophezulu. Ngokwembono zeshishini leplastikhi yokulungisa, ukuze kuqinisekiswe umgangatho wokungunda kunye nexabiso elifanelekileyo, ...
Iplastiki ikhawulezisa uguquko olutsha kwimveliso yeemoto
Kwiminyaka yakutshanje, ukusetyenziswa kweeplastiki kwiimoto kuyaqhubeka ukwanda. Okwangoku, ukusetyenziswa kweeplastikhi zeemoto eJamani, eUnited States, eJapan nakwamanye amazwe kufikelele kwi-10% ukuya kwi-15%, kwaye abanye bafikelela ngaphezulu kwama-20%. Ukujonga izinto ezisetyenzisiweyo ...
Ukungaphumeleli koomatshini besikhunta ekubumbeni ngenaliti kunale miba ilandelayo
1. Umzekelo, isitshixo sokuhamba sokhuseleko kumatshini weplastiki awufumani mqondiso, su ...
Inkcazo yemigaqo enxulumene nokubumba kweplastiki
1. Ubuninzi be-Relative / proportion Ubungakanani besihlobo sibhekisa kumthamo wenkampani yeziyobisi. Umlinganiselo ubhekisa kumyinge woxinano lwento ehambelana nemichiza kukuxinana kwamanzi. 2. Ubushushu bomphunga kunye nokulingana kokucinezeleka Ubushushu bomphunga ...
Yeyiphi imiba ekufuneka ihlawulwe kwimveliso yokubumba kweplastiki?
Ngexesha lokuvelisa, xa inyibilikisi yeplastikhi itofwe kumngxunya wokubumba phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu kwaye ibunjiwe phantsi koxinzelelo, xa iqondo lobushushu lisehla, ukunyibilika kuyaphola kwaye kuqinise kube yinxalenye yeplastiki. Ubungakanani besahlulo seplastiki sincinci kunesibumbeko, ...
Uyikhetha njani i-rack rack yomzi-mveliso wokubumba
Ukubumba kwaziwa ngokuba "ngumama weshishini" loshishino loshishino lwanamhlanje. Umngundo wenaliti ohlangabezana nemigangatho yoyilo unokuvelisa iimveliso ezifunekayo ebomini kunye nokusebenza kwiibhetshi, kwaye uqhubeke uqonde imveliso yobuninzi kunye nokubekwa emgangathweni kwepro ...
Zeziphi iintlobo kunye nolwakhiwo lwesikhunta seplastikhi
Plastic ngumngundo yinto compact. Inesimo esimdaka kwaye yamkela amandla okudumba angenanto. Ke ngoko, kukho iimfuno eziphezulu zokomelela kwesakhiwo, ukuqina, ubulukhuni ngokubanzi, uburhabaxa ngokubanzi kunye nokuchaneka kwemishini. Ukukhula ngumngundo zeplastiki iqondo manufact ...
Indlela yokuphucula umgangatho ngumngundo
Indlela esisiseko yokuphucula umgangatho wokungunda: uyilo lwesikhunta lelona nyathelo libaluleke kakhulu ekuphuculeni umgangatho wokungunda. Zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kubandakanya nokukhethwa kwezinto zokubumba, ukusetyenziswa kunye nokukhuseleka kobume besikhunta, ukungabinakho ukusebenza kweenxalenye zomngundo kunye nokulungelelaniswa komngundo ...
Ubunjani kunye nokusetyenziswa kwenaliti yokubumba
Uyilo Inaliti nokuvunda yinxalenye ebaluleke kakhulu kubomi bale mihla. Kubomi babantu, zininzi izinto ezisebenzisa izixhobo, kunye noomatshini abaninzi be-elektroniki kunye nezixhobo, ezingenakwahlulwa kuyilo lokungunda ngenaliti. Kungenxa yokuba oku kuphuhliswa kwemarike yenaliti yokubumba ...
Ukubeka emgangathweni kunye nenqanaba lesicelo sokubumba kwilizwe lam kunokufikelela kuma-50%
Emva kwexesha lophuhliso olukhawulezileyo kwilizwe lam lomngundo weenxalenye zomgangatho, iinxalenye ziye zaphuhla ngokuthe ngcembe kwicala lokubeka emgangathweni, ubungcali kunye nokwenza urhwebo, kwaye ezinye zazo ziye zafikelela kwinqanaba eliphezulu kwaye zenze inkqubela phambili ebonakalayo. Ukusuka kwinqanaba ...
Imbali kunye nolwalathiso lophuhliso lwexesha elizayo kwishishini lokungunda
Umngundo zizixhobo ezisisiseko zenkqubo yeemveliso zorhwebo ezinje ngoomatshini, ukuhamba ngenqwelomoya, iimoto, ielektroniki, unxibelelwano kunye nezixhobo zasekhaya, kwaye ziimveliso zetekhnoloji ephezulu. Okwangoku, ixabiso lilonke imveliso ukungunda China iye yaba yesithathu ehlabathini, yesibini kuphela Japan ...
Uthini umahluko phakathi kokulungiswa kwento yokubumba kunye nokuvelisa umngundo?
Umahluko kunye nokunxibelelana phakathi komngundo kunye ne-lathe: 1. Umngundo (mú jù), iintlobo ezahlukeneyo zomngundo kunye nezixhobo ezisetyenziselwa ukuvelisa imveliso ukufumana imveliso efunekayo ngenaliti yokubumba, ukubumba ukubetha, ukukhupha, ukusika okanye ukubumba ukubumba, ukunyibilikisa, ukunyathela kunye ezinye iindlela. Ngamafutshane, isikhunta si ...
Umxholo kunye nezibonelelo kunye nokungalunganga kwe-CNC
I-CNC sisixhobo somatshini esizenzekelayo esixhotyiswe ngenkqubo yolawulo lwenkqubo. Inkqubo yolawulo inokuqhuba ngokufanelekileyo inkqubo kunye neekhowudi zolawulo okanye eminye imiyalelo yokomfuziselo, kwaye iyichaze, ukwenzela ukuba isixhobo somatshini sihambele kwaye siqhubekise iinxalenye. Isifinyezo se-CNC ngesiNgesi sisishunqulelo ...
Iindlela ezisithoba eziphambili kuphuhliso lweshishini lomngundo weemoto
Umngundo sisixhobo esisisiseko seshishini leemoto. Ngaphezulu kwe-90% yamalungu kunye nezinto ezikhoyo kwimveliso yemoto kufuneka zenziwe ngumngundo. Ngokuka-Luo Baihui, ingcali yokubumba, malunga ne-1,500 yokubumba iyafuneka ukwenza imoto eqhelekileyo, engaphezulu kwe-1 000 yokunyathela ukungunda ...
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokuxinwa kokubumba
Xa uxinzelelo lubumba, kufakwa iihafu zokubumba ezifanayo kumatshini wokushicilela (uhlala u-hydraulic), kwaye ukuhamba kwabo kunqunyelwe kwi-axis ejikelezayo kwindiza yokubumba. Umxube we-resin, i-filler, izinto zokuqinisa, i-arhente yokuphilisa, njl njl. Icinezelwe kwaye iphiliswe kwimeko yokuba izalisa ...
Izinto ezichaphazela ubomi bomngundo weemoto
Uphuhliso olukhawulezileyo lweshishini leemoto lwangoku lenze ukuba abantu babe neemfuno eziphezulu nangaphezulu kuyo yonke imiba yeemoto. Kwangelo xesha, ubomi benkonzo yokubumba iimoto bekusoloko ingumba obalulekileyo oxhalabisayo kumashishini. Ke ezo zizathu zizinto ...
Intshayelelo kwimeko yophuhliso lwangoku ngenaliti yenaliti kwilizwe lam
Ngophuhliso olukhawulezileyo lwamashishini afana neemoto kunye nezixhobo zasekhaya, umngundo wenaliti ukhule ngokukhawuleza. Indawo yokushishina ngenaliti kwimveliso yelizwe lam sele ibaluleke kakhulu. Emva kophuhliso olukhawulezayo kwiminyaka yakutshanje, inaliti ...
Amanyathelo asisiseko ekwenziweni komngundo
1.Ukuvelisa imveliso yokubumba: Zininzi izinto ze-master mold. Ngokubanzi, imathiriyeli yokubumba eyintloko iyadingeka ukuba ibe lula ukuyila, kulula ukuyiphumza, kwaye ibe neempawu zokuzinza okuhle. Njengokhuni, udaka, i-wax, njl njl. Sihlala sisebenzisa iinkuni. Ngokwe-drawin yemveliso ...
Yintoni ubungakanani beemarike zeshishini lokungunda lasekhaya lelizwe lam ngoku?
Ukubumba okwenziwe ngeplastikhi kwenza elona nani likhulu lokuthengiswa kwezibumba kwilizwe lam, zibala malunga neepesenti ezingama-45; Umngundo wokunyathela usebenze malunga ne-37%; bephosa izinto zokubumba ezimalunga ne-9%; kunye nezinye iintlobo zokubumba zizonke malunga ne-9%. Kukho malunga nama-30,000 kwimizi-mveliso yokuvelisa ukungunda ...
-Uhambo oluya eNankunshan Hot Spring Health Valley Kuyanetha iintsuku kwaye andazi ukuba intwasahlobo idlulile. Xa imozulu intle, ndiyaqonda ukuba ihlobo sele lifikile kudala. Ixesha lihlala lisendleleni yethu engaziwayo, ikhalenda ka-2019 iguqulwe ngoJuni, kunye neshushu eshushu ...
Njengomenzi wokungunda wokuthumela eTshayina, ngokuthelekisa ukungunda kwasekhaya, ukurhweba ngamaxabiso okungunda ngokuqinisekileyo kuphezulu kule minyaka idlulileyo, umsantsa ubangelwa ngumgangatho wefriendst. Umbutho waseMelika woShishino lwePlastiki (SPIAN-102-78) ukwahlula ukungunda kwiindidi ezintlanu. Ezi ntlobo ezintlanu ngumngundo hav ...
Ngomhla wama-29- 2021
2K Over-Ukubumbela zomngundo Pre-Deformation Ikubumbe CNC Milling CNC Lathing Iimveliso zoMzekelo Ukhulula Umngundo Precision zomngundo Ubuninzi beCavity Mold Ikhava yeeNjini eziZenzekelayo Ubungakanani obukhulu bomngundo Izixhobo zeOfisi nezeKhaya
Iinkampani zeplastikhi zokuBumba iiPlastikhi eMelika Iinkampani zeplastiki Inaliti Ukubumbela Imveliso yePlastiki eMelika Rapid Umngundo eMelika Isixhobo eJamani UMenzi woMngundo eMelika Umlandeli kunye neFan Shroud eMelika Icandelo loomatshini eMelika Iinxalenye zensimbi ngomatshini eMelika Imveliso yePlastiki eJamani Imveliso yePlastiki eMelika Plastic Inaliti Ukubumbela Plastic Ukubumbela EJamani Ukukhawuleza komngundo eJamani Prototype Ikubumbe eMelika Inaliti zomngundo eMelika Inaliti yeplastiki eJamani Inaliti zomngundo EJamani Imveliso yohlobo lweprototype eMelika Imveliso yePrototype eJamani Plastic Ikubumbe eMelika Ukufa kweJamani Plastic Ukubumbela In America Ukufa kwesikhunta eMelika Plastic Ikubumbe eJamani IiJig eJamani Isixhobo eMelika Itanki lomoya kunye namanzi eMelika IiJig eMelika UMenzi woMngundo eJamani Itanki yomoya namanzi eJamani Ukulinganisa eJamani Ukuxelwa kwangaphambili kwiJamani UMenzi woMngundo eMelika Ukulinganisa eMelika Umlandeli kunye neFan Shroud eJamani Ukuxelwa kwangaphambili eMelika Icandelo leRadiator eMelika yaseMelika Icandelo leRadiator eJamani I-Metal Parts Machining eJamani